💻 Android Development သင်တန်း 💻
Kotlin Programming အသုံးပြု၍ သင်ကြားပေးသွားမည့် Android Development Class တွင် ပါဝင်မည့်သင်ခန်းစာများ
1. Basic Components 2. Styling and Layouts 3. Activity and Intents & Intent Filters 4. UI and Navigations 5. Animation & Transitions 6. Image and Graphics 7. Audio & Videos 8. Background Task 9. App data & Files 10. User data and Identity 11. User Location 12. Touch & Inputs 13. Camera & CameraX 14. Sensors 15. Connectivity 16. Render Script 17. Web-Base Content 18. Instant App 19. Kotlin Anko Library 20. Retrofit Http Library 21. Async Http Library
Android Developer တစ်ယောက်အဖြစ် ပြည်တွင်း ပြည်ပ လုပ်ငန်းခွင်များတွင် ယုံကြည့်ချက်ရှိရှိ ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင် နိုင်စေရန် အခြေခံမှ စ၍ အဆင့်ဆင့် လက်တွေ့ Projects များ လုပ်နုိုင်သည် အထိ လိုအပ်သည့် Android Concepts အားလုံးကို သင်ကြားပေးပါတယ်၊ သင်တန်းကာလ အတွင်းမှာ Android Concepts များလေ့လာပြီး လက်တွေ့ Project သုံး ခုကို လုပ်ဆောင်သွား ရမှာဖြစ်ပါတယ်၊ 1. Simple Api Base Project 2. Android Ecommerce Project (ဈေးရောင်းဈေးဝယ်) 3. Message App ( ဖေ့ဘွတ်ခ် Message ကဲ့သို့)
🎗️ Android ဘာသာရပ်အတွက် ************************** 🤵 သင်ကြားမည့်သူ => Waiferkolar 🕐 သင်တန်းချိန် => Sat-Sun => 4PM => 7PM 🗓 သင်တန်းကာလ =>2လ (တစ်ရက် ၃ နာရီ) 💵 သင်တန်းကြေး =>3သိန်း 👉 သင်တန်းအားလုံးအတွက် စမည့်ရက် => July3👉 သင်တန်း စတင်လက်ခံမည့်ရက် => August3🏫 သင်တန်း တည်နေရာ => လှည်းတန်း စံရိပ်ငြိမ် မှတ်တိုင် ၊ Fashion For You အဝတ်ဆိုင် အပေါ်ထပ်၊ ☎ ဆက်သွယ်နိုင်သည့် ဖုန်းနံပါတ်များ => 09-400-4000-85, 09-400-4000-86,